Ejipta tamin' ny Andro Taloha - Wikipedia
I Ejipta tamin' ny Andro Taloha na Egipta tamin' ny Andro Taloha dia mifandraika amin' ny vanimpotoana teo anelanan' ny fiandohany sy ny taonjato faha-7 taor. J.K. Atao hoe egiptôlôjia na ejiptôlôjia ny siansa misahana ny fandalinana izany tantara sy sivilizasiona izany.
Ny sfinksa sy ny pirmidan'i Kefrena ny Ejipta
Ny mpahay tantara dia mizara ny tantaran' i Ejipta tamin' ny Andro Taloha nanjakan' ireo faraôna (na farao) ho empira telo, dia ny Empira Voalohany sy ny Empira Antenantenany ary ny Empira Vaovao, izay elanelanin' ny vanimpotoana antenatenany nisian' ny fanjakà-mpanjaka maro dia maro. Rehefa mihamalemy ny fanjakana dia teraka ny fivakivakisana omban' ny loza isankarazany sy ny fananiham-bohitra ary ny fahantrana. Nifandimby amin' ny vanimpotoan' ny firoboroboana ny vanimpotoan' ny fahasahirananana atao hoe vanimpotoana antenatenany.Taorian' ny vanimpotoan' ny faraôna dia nisy ny Vanimpotoana Farany izay narakarahin' ny Vanimpotoana helenistika sy ny Vanimpotoana rômana ary ny Vanimpotoana bizantina.
1 Ny tantaran' i Ejipta tamin' ny Andro Taloha
1.1 Ny fiandohan' ny sivilizasiona egiptiana
1.1.1 Nagada I: kolontsaina badariana sy amratiana
1.1.2 Nagada II: kolontsaina gerzeana
1.1.3 Nagada III: ireo dinastia tinita
1.2 Ny Empira Voalohany
1.2.1 Ny andron’ny piramida
1.2.2 Ny faraôna, zanaky ny andriamanitra Ra
1.2.3 Ny faharavan’ny Empiran’i Memfisy
1.3 Vanimpotoana anelanelany voalohany
1.3.1 Ny fikorontan’ireo dinastia
1.3.2 I Herakleôpôlisy nifaninanaa tamin’i Tebay
1.4 Ny Empira Antenantenany
1.4.1 Ny nahaterahan’ny fivavahana amin’i Amôna-Ra
1.4.2 Fihavaozana ara-tsaina sy ara-kolontsaina
1.5 Ny Vanimpotoana anelanelany faharoa
1.5.1 Ny fiorenam-ponenan’ny Hiksôsy
1.5.2 Ny fanoherana avy ao Tebay
1.6 Ny Empira Vaovao
1.6.1 Ny dinastian’ireo Totmôsisy
1.6.1.1 Ny fisandratan’ireo hipôgea
1.6.1.2 Fanitaran-tany hanjakana
1.6.1.3 Ny vanimpotoan'i Akenatôna
1.6.2 I Ejipta tamin’ny andron’ireo Remsesy
1.6.2.1 Ny fandrosoana ara-pôlitika sy ara-kolontsaina
1.6.2.2 Ny fananiham-bohitr’ireo Vahoakan’ny Ranomasina
1.7 Ny Vanimpotoana Farany
1.7.1 Ady tombotsoa
1.7.2 Ny sivilizasiona saita
1.7.3 Ny fanjakazakan’ny Persiana
1.8 Vanimpotoana helenistika sy rômana ary bizantina
1.8.1 Ny Vanimpotoana helenistika
1.8.1.1 Ny vanimpotoana makedôniana
1.8.1.2 Ny vanimpotoanana lagida
1.8.2 Ny vanimpotoana rômana
1.8.3 Ny vanimpotoana bizantina
Ny tantaran' i Ejipta tamin' ny Andro TalohaHanova
Ny fiandohan' ny sivilizasiona egiptianaHanova
Ny sivilizasiona ejiptiana izay niforona tao afovoan' ny tany efitra, dia nivoatra tao amin' ny lohasahan' ny ony Nily (na Neily) izay miantoka ny fahaveloman' ny mponina tao. I Ejipta dia tsy ho nahazo ny tanjany raha tsy nitambatra sy notapahin' ny mpanjaka tokana sady matanjaka.
Nagada I: kolontsaina badariana sy amratianaHanova
Maro ireo vato fisaka voasa izay manaporofo ny efa nisian’ny olombelona tany amin’ny taona 500 000 tal. J.K. Tany amin’ny taona 5000 tal. J.K. anefa vao niseho ny sivilizasiona voalohany azo faritana mazava, dia ny sivilizasiona badariana, izay nomena izany anarana izany araka ny anaran’ny toerana niforonany atao hoe Badary (Badari) izay hita tany amin’ny tapany ambony amin’i Ejipta (Ejipta Ambony). Izao mantsy ny zava-nisy: ireo mponina tao Sahara dia voatery nanakaiky ny faritra mando noho ny fihamainan’i Sahara, niorim-ponenana tao amin’ny lembalemban’i Faioma (Fayoum) sy tao amin’ny lohasahan’i Nily. Tany amin’ny taona 4000 tal J.K. any ho any dia nandimby ny sivilizasiona badariana ny sivilizasiona amartiana (avy amin’ny anaran’ny toerana atao hoe el-Amrah), izay avy amin’ny kolontsain’ny mponina tao Nagada, mifandraika amin’ny fizaràna voalohany izay atao hoe Nagada I. Tao amin’ny tanàna madinika maro no nonenan’ny olona. Ireo kolontsaina badariana sy amratiana ireo dia nifanandrify amin’ny fiforonan’ny fambolena (fambolena orza sy varimbazaha) sy amin’ny fipoiran’ireo fomba fanao amin’ny maty, dia ny fandevenana.
Nagada II: kolontsaina gerzeanaHanova
Tokony tamin’ny taona 3500 tal. J.K. dia nisy vahoaka hamito-semitika izay nanomboka nifangaro tamin’ny mponina tao amin’ny lohasahan’i Nily tao amin’ny faritr’i Faioma (Fayum). Noho izany dia nosoloan’ny kolontsaina gerzeana na Nagada II ny kolontsaina amartiana. Nivelatra hatrany Nobia ka hatrany amin’ny Vinanin’i Nily ny sivilizasiona gerzeana. Niavaka ny zavakanto tao (sary hosodoko mampiasa ny loko fotsy amin’ny fanaovana ny soritra eo ambonin’ny lafika miloko manopy mavokely) sy ny hairaha (teknika) (fitaovana ampiasaina amin’ny taozavatra sy fitaovam-piadiana). Nizara ho fanjaka-mpanjaka roa ireo tanàna tao amin’ny lohasahan’i Nily, dia ny fanjakan’i Botô tao Ejipta Ambany sy ny fanjakan’i Hierakônpôlisy tao Egipta Ambony.
Nagada III: ireo dinastia tinitaHanova
Nanomboka tamin’ny Nagada III izay atao hoe kolontsaina semainiana ny vanimpotoana tinita (avy amin’ny anarana hoe Tisy (This)). Nanatanteraka ny fanambarana ny faritra roa i Narmera (Narmer) izay heverina ho tsy iza fa i Menesy (Menes). Avy ao amin’ny fanjakan’i Hierakônpôlisy i Narmera. Nataony io fanambarana io mba hamoronany firenena kambana izay nanana an’i Tisy (This) ho renivohitra, niorina teo akaikin’i Abidôsy. Izy no hisikina ny satroboninahitra roa miaraka voalohany (dia ny pschent). Izany fanao izany dia notohizan’ireo faraôna nifandimby hatramin’izay ka hatramin’ny nahazoan’i Aleksandra Lehibe an’i Ejipta. Niorina ny dinastia tinita voalohany izay atao hoe "dinastia 0".
Heverin’ny mpahay tantara fa ny dinastia tinita no namorona ny fiheverana ny fitondran’ny mpanjaka ho zo avy amin’ny andriamanitra ary io dinastia io ihany koa no namorona ny fandraharaham-pitondrana avangongo amin’ny ivontoerana tokana. Nandroso ny fitarihan-drano amin’ny fambolena ka nahafaha-nitrandraka ny tany.
Ny Empira VoalohanyHanova
Faraôna misatro-boninahitra roa sosona
Ny Empira Voalohany dia nanomboka tamin’ny taona 2649 tal. J.K. ka niafara tamin’ny taona 2152 tal. J.K. ary nahitana dinastia miisa efatra: ny dinastia fahatelo hatramin’ny fahenina.
Ny andron’ny piramidaHanova
Ireo piramidan'i Gizà
Tokony tamin’ny taona 2349 tal. J.K. no nanombohan’ny vanimpotoan’ny Empira Voalohany. Nafindra any Memfisy (Memphis) ny renivohitra, tanàna vaovao naorina eo amin’ny fisarahan’ny tanin’i Ejipta Ambony sy ny an’i Ejipta Ambany. Miavaka noho ny fisehoan’ny fanorenan-javatra mijoalajoala ny Empira Voalohany. Ny mpanjaka Josera na Jesera (Djoser na Djeser) dia nanana loham-pandraharahana atao hoe Imhôtepa, izay nanorina voalohany tao Sakarà (Sakkarah) ny fasa-mpanjaka ahitana antoana laharam-bato fito miendrika tohatra. Izany fasana lehibe izany dia mitahiry ny tsy feteza-matin’ny mpanjaka, izay manohy ny fiarovany ny vahoakany na dia any am-pasana aza. Isan’izay fantatra ny anaran’i Keôpsa sy Kefrena ary Mikerinôsy, izay fantatra noho ny fisian’ny piramidan’i Gizà (Giza). I Imhôtepa dia azo inoana fa nanoratra ny fanangonan-dahatsora-pahendrena egiptiana voalohany.
Ny faraôna, zanaky ny andriamanitra RaHanova
Tamin’ny dinastia faha-4 dia nihamatanjaka ny fahefan’ny mpanjaka izay ninoana tamin’izay fa fahatongavan’ny andriamanitra Hôrosy sy Ôsirisy ho nofo eto an-tany. Nampihatra ny fahefany tamin’ny fifehezana an’i Ejipta ny faraôna tamin’ny alalan’ny fitondram-pajakana izay nitombo hery sy andraikitra hatranihatrany. Nanomboka taminn’ny fitondran’i Snefro dia nampian’ny atao hoe viziry (vizir) ny mpanjaka teo amin’ny fitantanan-draharaha. Nisy ny fandrosoana nandritra ny Empira Voalohany noho ny fitrandrahana ireo otri-karena ankibon’ny tany tao Sinay (na Sinaia) sy noho ny fifanakalozan-draharaham-barotra tamin’i Foinikia (na Fenisia) izay nahazoany hazo avy any Libàna (na Libanona) izay ampiasaina amin’ny fanamboarana ny vatam-patin’ny faraôna. Nifandray tamin’i Sipra (na Kiprôsy) sy tamin’i Kreta koa i Ejipta ka nametraka ny fanjakazakany tamin’i Nobia, izay nanome azy vangin’elefanta sy hazo ebena (ébène). Ny fiitaran’ny tany notapahin’ny faraôna sy ny firoborobon’ny toekarena dia niteraka fiforonan’ny mpandraharaha asam-panjakana teo amin’ny renivohitra sy tany amin’ireo faritra sisa, izay nitombo hery ka lasa loza nitatao ho an’ireo faraôna izany . Niseho ny fizakan-tenan’ireo mpifehy fileovana. Mety tany amin’ny fiafaran’ny dinastia faha-5 no nahazo vahana ny andriamanitra masoandro atao hoe Ra (na Re), noho ny asan’ireo mpitondra fivavahana tao Heliôpôlisy (midika hoe "tanàn’ny Masoandro"). Nanomboka teo dia noheverina ho zanak’i Ra ny mpanjaka ejipsiana (ny faraôna).
Nanomboka tamin’izany vanimpotoana izany no nizahan’ny tantsambo ejipsiana an’i Afrika hatrany amin’ny faritra misy an’i Sômalia ankehitriny. Nandroso ny haikintana sy ny fitsaboana
Ny faharavan’ny Empiran’i MemfisyHanova
Vanimpotoana anelanelany voalohanyHanova
Ny vanimpotoana anelanelany voalohany ity dia nanomboka tamin’ny taona 2152 tal. J.K. ka bniafara tamin’ny taona 2065 tal. J.K. ary nahitana dinastia dimy, dia ny dinastia faha-7 hatramin’ny faha-11.
Ny fikorontan’ireo dinastiaHanova
I Herakleôpôlisy nifaninanaa tamin’i TebayHanova
Nanomboka tamin’ny dinastia faha-9 dia maro ny dinastia niara-nanapaka sady samy nikatsaka ny hamerina indray ny firaisan’i Ejipta ho amin’ny tombontsoany. Ireo dinastia faha-9 sy faha-10 izay atao hoe "herakleôpôlitàna" dia nifehy avy ao Herakleôpôlisy ny roa ampahatelon’i Ejipta tamin’izaay, fa ny dinastia faha-11 kosa izay, mpiantafika kokoa, dia niorina tao Tebay (na Teba) tao Ejipta Ambony. Avy amin’ity dinastia faha-11 ity no nipoiran’ny Empira Antenantenany.
Ny Empira AntenantenanyHanova
Ny Empira Antenantenany dia nanomboka tamin’ny taona 2065 tal. J.K. ka niafara tamin’ny taona 1781 tal. J.K. ary nahitana fifandimbiasan’ny dinastia efatra, dia ny dinastia faha-11 hatramin’y faha-14. Tokony ho tamin’ny taona 2135 tal. J.K. dia nanorina ny dinastia faha-11 ireo mpanapaka fileovana (nômarka) tao Tebay. Niezaka nanitatra ny fanjakany manomboka ao Tebay mianavaratra sy mianatsimo ny Antefa (Antef), mba hampiray indray an’I Ejipta, nefa ny faraôna Mentohôtepa I no namita ny fakana indray ny tany. Nandritra ny fanapahan’ity mpanjaka ity no naha andriamanitra fara tampony an’i Amôna.
Ny nahaterahan’ny fivavahana amin’i Amôna-RaHanova
Tamin’ny dinastia faha-12, izay natomboky ny faraôna Amenemesy I, dia nafindra ara-pamantarana tany avaratra any Litsty ny renivohitra, izay tsy lavitra an’ i Faioma. Nandritra izany fotoana izany dia niseho tamin’ny alalan’ny marimaritra iraisana ara-pivavahana ny fikendrena ny fanamafisana ny firaisan’i Ejipta. Izany marimaritra iraisana izany dia niseho teo amin’ireo mpitondra fivavahana tao Tebay sy tao Heliôpôlisy izay nampiombonana ny andriamanitra Amôna tamin’ny andriamanitra Ra. Amin’ny maha mpanelanelana ny andriamanitra Amôna-Ra amin’ny olombelona ny faraôna dia nanamafy ny fahefany ny faraôna tamin’ ny alalan’ny fanetreny ny fahefan’ny tompomenakely any amin’ny faritany sy tamin’ ny alalan’ny fiantohany ny fifandimbiasana eo amin’ny fitondran’ny mpanjaka. Tamin’izany fotoana izany ihany dia tsy ny faraôna ihany no afaka misitraka ny tsy feteza-maty fa ny olona rehetra mahafeno ny fepetra momba ny fombafombam-pivavahana tokony hatao.
Fihavaozana ara-tsaina sy ara-kolontsainaHanova
Nandritra ny fanapahan’ireo Amenemesy sy ireo Sesôstrrisy diai niforona koa ny sarangan’ny mpiasam-panjakana, izay teo anelanelan’ny vahoaka sy ireo olona ambony. Nitombo miandalana ny fahefan’ny mpitan-tsoratra (scribes). Nifoha indray ny saina sy ny kolontsaina tao Ejipta ka niteraka ny fahamaroan’ny sokajin-dahatsoratra, hatramin’ny tantara mahatalanjona, ny fanadihadiana ny fisainan’ny olombelona, ny tononkalo malahelohelo, ny famelabelarana momba ny siansa. Izany rehetra izany dia voasoratra amin’ny papirosy (na papiry). Nandroso ny fanorenana trano sy lapa ary fasana tsara tarehy, toy izany koa ny zavakanto sy ny fanefena firavaka vahevitra mialoha mbamin’ny pitsopitsony madinika.
Ny pôlitikam-pifandraisana amin’ny any ivelany nataon’ny faraôna Amenemesy I dia notohizan’ireo mpandimby azy toa an’i Sesôstrisy I, i Amenemesy II, i Sesôstrisy II, i Sesôstrisy III, i Amenemesy III ary i Amenemesy IV. Nisy ny fanorenana manda fiarovana manerana an’i Nobia sy i Sodàna. Misy ny solontenan'ny mpanjaka (governora) nalefa hifehy an’i Palestina sy an’i Siria. I Sesôstrisy III izay nanapaka tamin’ny taona 1881 tal. J.K. hatramin’ny 1842 tal. J.K. dia nanangana tafika maharitra nampiasainy tamin’ny fanafihana ny Nobiana tany atsimo sy nentiny niady tamin’ny Libiana tany andrefana. Nozarainy ho faritra telo matanjaka ny fandraharahana ny fanjakana, izay nofehezin’ny mpiasam-panjakana ambony avy izay niakina tamin’ny viziry.
Ny Vanimpotoana anelanelany faharoaHanova
Ny vanimpotoana anelanelany faharoa dia nanomboka tamin’ny taona 1781 tal. J.K. ka niafara tamin’ny taona 1550 tal. J.K. ary nahitana dinastia dimy, dia ny dinastia faha-13 hatramin’ny faha-17.
Ny fiorenam-ponenan’ny HiksôsyHanova
Tamin’ny fiandohan’ny taonarivo faha-2 dia nangozohozo ny firaisan’i Ejipta noho ny firohotry ny vahoaka semita avy any amin’ny faritra afovoan’i Azia izay nitsoaka noho ny fananiham-bohitra nataon’ ny Indô-eorôpeana tao amin’io faritra io. Ireo Semita tonga tao Ejipta ireo no atao hoe Hiksôsy. Ireo Hiksôsy ireo dia niorim-poneana tao avaratra atsinanan’ny Vinanin’i Nily. Nanararaotra ny fihalemen’ny fahefan’ireo faraôna tamin’ny dinastia faha-13 hatramin’ny faha-14 izy ireo mba haka an’i Ejipta Ambany. Nahay niady ara-tafika izy ireo sady nitondra soavaly sy kalesin-tsoavaly tany Ejipta. Nisy ny vanimpotoana anelanelany faharoa izay nanomboka tamin’n,y taona 1781 tal. J.K. tamin’i Avarisy, izay ivon’ny herin’ny Hiksôsy, dia lasa renivohitra tamin’ny dinastia faha-15 vahiny. Ireo mpanjaka hiksôsy dia nandray ny fomba amam-panaon’ny Ejipsiana, nivavaka tamin’ireo andriamanitra Seta sy Ra (na Re) ary naka tahaka ny fomban’ny mpanjaka ejipsiana.
Ny fanoherana avy ao TebayHanova
Ny faritra atsimon’i Ejipta dia nanohitra ny fidiran’ny Hiksôsy. Ny andriandahy tao Tebay izay nifehy ny farirta eo anelanelan’i Elefantina sy Abidôsy, dia nanao izay hanafahana zany faritra izany. I Kamosisy dia nandresy ny Hiksôsy, ary i Amôsisy rahalahiny no nandroaka azy ireo sady nampiray indray an’i Ejipta. Nopotehiny daholo ireo sisa navelan’ny kolontsaina hiksôsy ka izany no tsy ahafantarana loatra ny momba ity vanimpotoana anelanelany faharoa ity.
Ny Empira VaovaoHanova
Fara fiitran'ny tany fehezin'ny mpanjakan'i Ejipta
Ny Empira Vaovao dia nanomboka tamin’ny taona 1550 tal. J.K. ka niafara tamin’ny taona 1075 tal. J.K. ary nahitana dinastia telo, dia ny dinastia faha-18 hatramin’ny faha-20. Naharitra taonjato dimy ity empira ity. I Tebay no natao renivohitra. Nitondra amin’ny fara tampony ny voninahitra sy ny tanjak’i Ejipta ireo mpanjaka nanapaka tamin’izany.
Ny dinastian’ireo TotmôsisyHanova
Ny fisandratan’ireo hipôgeaHanova
I Karnaka (Karnak), izay niorina teo amin’ny faritra amin’ny ilany atsinanan’i Nily, dia tonga toerana niroboroboan’ny fanorenan-javatra lehibe, izay niantomboka tamin’ny fanapahan’i Amenôfisy I. Voalohany dia nosarahiny tamin’ny tempoly fandevenana ny fasana tena nandevenana azy sady izy no nanorina ilay fomba mtazona ho tsiambaratelo ny toeram-pandevenana azy. I Totmôsisy I mpandimby azy dia nampangasy ny hipôgeany tao amin’ny Lohasahan’ny Mpanjaka. Nanomboka tamin’ny fotoana nanapahan’i Totmôsisy II dia nitana anjara asa lehibe ireo andriambavy vadin’ny faraôna.Ohatra amin’izany i Hatsepsota vadin’i Totmôsisy II, rehefa avy nisahana ny asa maha faraôna an’i Totmôsisy III izay mbola kely loatra (lasa vadiny taty aoriana) dia nanao ny raarahan’ny faraôna.
Ireo andriamanjaka tao amin’ny Empira Vaovao dia naka tahaka ny nataon’ireo faraôna tamin’ny vanimpotoana teo alohany. Nanana tafika matanjaka izy ireo. Mba hiarovana amin’ny loza mananontanona noho ny afitsok’ireo fanjakana any amin’ny faritra Atsinanana Akaiky toa an’i Hatỳ any Anatôlia, i Mitanỳ (Mitanni) eo anelanelan’i Tigrisy (Tigra) sy i Eofrata, ary i Babilôna, dia nisafidy ny politikan’ny mpanitatra tany izy ireo. I Totmôsisy III, izay nanao ady mitohy tany Azia, voatantara ao amin’ireo vaton’ny tempoly lehiben’i Amôna-Ra ao Karnaka, dia nandresy sy naka an’i Siria tamin’ny taona 1479, rehefa avy nandresy ny fiarahan’i Siria sy i Palestina izay notarihin’i Mitanỳ. Taty aoriana i Amenôfisy II dia nanao fanekem-pihavanana amin’i Mitanỳ, ka nanomboka vanimpotoana anjakan’ny fifampiraharahana tsy misy ady (diplômasia) izay niroborobo tokoa. Nitsofoka tao amin’ny tanin’i Ponto (Etiopia) tao atsimo ny Ejipsiana ka nanitatra ny faritry ny taniny hatrany amin’ny katarakta fahefatra. Ireo tany teo ambany fanapahany sy fiarovany dia nandoa hetra tamin’izy ireo tamin’ny alalan’ny fanomezana olona hatao miaramila sy hatao andevo hiasa amin’ny fanatanterahana fanorenana lehibe sy amin’ny fambolena. Ho takalon’izany dia tsy nokasihin’ny Ejipsiana ny andrim-piarahamonina sy ny fivavahanan’ireo tany ireo tsirairay avy. I Nobia irery no nampidirana manontolo ny kolontsaina ejipsiana.
Nisy loza mananontanona roa natahoran’i Ejipta tamin’ny andron’ireo Totmôsisy, dia ny Hitita avy any ivelany izay nandroaka ny Ejipsiana hiala an’i Siria, sy ireo mpitondra fivavahana tao Tebay (na Teba) izay nisahana anjara asa tsy nitsaha-nitombo teo amin’ny fiainana ara-politika sy ara-pivavahana. Ny mpisoron-dehiben’ny andriamanitra Amôna izay tonga laharana faharoa amin’ireo sokajin’olona misahana raharaham-panjakana.
Ny vanimpotoan'i AkenatônaHanova
I Anôfisy IV dia te hanamafy ny fivavahana ejipsiana, ka nandray anjara lehibe amin’izany ezaka izany i Nefertity vadiny. Niezaka ny hanafoana ny fivavahana tamin’i Amôna izy mba hampanjakany ny fivavahana amin’andriamanitra iray, dia ny andriamanitra Atôna, andriamanitra masoandro. Niova anarana ho Akenatôna izy ("ilay ankasitrahan’i Atôna") ary nandao an’i Tebay ka nanorina renivohitra vaovao: i Aketatôna (izay atao hoe Tell el-Amarna ankehitriny). Ny fivavahana tamin’i Atôna anefa nilaozan’ny olona tamin’ny fiafaran’ny fanapahany ka nafindran’i Totankamôna vinantony tany Tebay indray ny renivohitra.
I Ejipta tamin’ny andron’ireo RemsesyHanova
Ny fandrosoana ara-pôlitika sy ara-kolontsainaHanova
Ny fananiham-bohitr’ireo Vahoakan’ny RanomasinaHanova
Tsy nisy zavatra natahoarana intsony ny momba ny Hitita nefa tsy maintsy narovana tamin’ny fidiran’ny firenena hafa ny sisin-tany. Tsy iza ireo firenena ireo fa ireo atao hoe Vahokan’ny Ranomasina, izay avy any amin’ny morontsirak’i Azia Minora sy ny morontsirak’i Grisia (na Gresy) izay nandroahan’ny fananiham-bohitra vaovao nataon’ireo Indô-eorôpeana azy ireo sy noho ny fahatongavan’ireo Dôriana tao amin’ny Ranomasin'i Egea (na Ezea). I Menetà (na Merenptà) izay zanak’i Ramsesy II sy mpandimby azy teo amin’ny fitondrana, dia nandroaka ireo Vahoakan’ny Ranomasina ireo. Tamin’izany vanimpotoana izany no nandaozan’ny Hebreo (na Zanak’i Israely) an’i Ejipta tamin’ny fanenjehana nataon’ny faraôna azy ireo. Rehefa maty i Ramsesy III, izay faraôna faharoa tao amin’ny dinastia faha-20, dia nanomboka ny fitontonganan’ny laza sy ny herin’ny Empira Vaovao. Rehefa nampahantrain’ny Asiriana sy ny Libiana sady notafihiny i Ejipta dia ny mpitondra fivavahana tamin’ny andriamanitra Amôna no nandray ny fahefana ara-politika, ka isan’izany ny mpisorona atao hoe Herihôra.
Ny Vanimpotoana FaranyHanova
Ny Vanimpotoana Farany dia nanomboka tamin’ny taona 1075 tal. J.K. ka niafara tamin’ny taona 332 tal. J.K. ary nahitana ny fifandimbiasan’ny dinastia miisa iraika ambin’ny folo, dia ny dinastia faha-21 hatramin’ny faha-31.
Tamin’ny taona 1075, i Ejipta, izay nizara ho lohany roa, dia nitondra faisana tamin’ny fananiham-bohitra nataon’ny vahiny. Tany avaratra, i Smendesy dia nanorina ny dinastia faha-21 atao hoe dinastia tanita, araka ny anaran’ny renivohiny atao hoe Tanisy. Atao atsimo, ny mpisoron’i Amôna dia nahazo ny anaram-boninahi-mpanjaka ka nanapaka avy tao Tebay saika tsy niankina na tamin’iza na iza.
Tamin’ny taonjato faha-8 tal. J.K. dia nanafika ka nahazo an’i Ejipta avy tao atsimo ny mpanjakan’i Kosy (Kush). Nanjakan’ny Sodaney tao Napata izay nanafangaro ny fomba-drazany tamin’ny kolontsaina ejipsiana i Ejipta Ambony. Taonjato iray taty aoriana dia voazanaky ny Asiriana ny Vinanin’i Nily.
Ny sivilizasiona saitaHanova
Nahazo aina indray i Ejipta tamin’ny andron’ny dinastia faha-26 izay naharitra nandritra ny taona 664 hatramin’ny 525 tal. J.K. taorian’ny nandroahan’i Psametika I mpanjakan’i Saisy ny Asiriana sy ny Sodaney sy taorian’ny namerenana indray ny firaisan’i Ejipta. Na dia izany aza dia tsy maitsy nanao izay hiosokafan’i Ejipta amin’ny varotra iraisam-pirenena tamin’ny Grika mba hanavotana azy ara-toekarena. Izany fihavaozana izany dia nahitana ny fakan-tahaka ny kolontsaina sy pôlitikan’ny tontolo grika. Tsy nahasakana ny fitontonganan’i Ejipta anefa izany finiavan’ny dinastia faha-26 izany fa nanalava kosa ny fotoana hahatanterahany.
Ny fanjakazakan’ny PersianaHanova
Ny dinastia faha-27 dia tsy ejipsiana fa an’ireo Akemenida, satria azon’i Kambisesy II mpanjakan’i Persia (na Persa) tamin’ny taona 525 tal. J.K. i Ejipta manontolo. Tsy voaroaka ny Persiana (na Persa) raha tsy teo ny fanampian’ny Grika. Ireo dinastia telo manaraka dia ejipsiana nefa tamin’ny taona 342 tal. J.K. dia azon’ny Persiana indray i Ejipta.
Vanimpotoana helenistika sy rômana ary bizantinaHanova
Ny Vanimpotoana helenistikaHanova
Ny vanimpotoana makedônianaHanova
Nanafaka an’i Ejipta teo ambany vahohon’ny Persiana ilay mpitari-tafika makedôniana (na masedôniana) Aleksandra Lehibe izay nametraka ny tafiny tao Ejipta tamin’ny taona 332 tal. J.K. Hatramin’izay ka hatramin’ny taona 30 tal. J.K. dia tafiditra ao amin’ny tontolo helenistika i Ejipta.
Nanorinany tanànan’i Aleksandria, dia nandao an’i Ejipta i Aleksandra Lehibe tamin’ny lohataon’ny taona 331 tal. J.K. ary nahazo sitraka tamin’ny vahoaka tao Ejipta noho ny namelany azy ireo hiaina araka ny lalàna sy ny kolontsaina ejipsiana. Nanohana an’i Aleksandra ny mpitondra fivavahana noho ny nankanesany tao amin’ny tempolin’i Amôna ka nilazany ny maha zanak’andriamanitra azy koa toa ireo faraôna teo aloha. Ny mpitari-tafik’i Aleksandra no nanapaka an’i Ejipta ka i Ptôlemeôisy (na Ptôlemeô na Ptôleme) no vatendry ho satrapan’i Ejipta taorian’ny fahafatesan’i Aleksandra tamin’ny taona 323 tal. J.K. nanambara ny tenany ho mpanjaka i Ptôlemaiôsy tamin’ny taona 305 tal. J.K. ary nitondra ny anaram-boninahitra hoe faraôna koa.
Ny vanimpotoanana lagidaHanova
Nandritra ny taonjato telo dia nahatonga an’i Ejipta ho isan’ireo firenena matanjaka indrindra ny dinastia lagida (taranak’i Lagôsy) teo amin’ny tontolo helenistika (nandray ny sivilizasiona grika). Tamin’ny andron’i Ptôlemaiôsy III Evergetesy no nahatratra ny fara-fiitarany ny empira ptôlemaîka izay nanapaka ny ampahany lehibe tamin’i Siria, nanapaka an’i Kilikia (na Silisia), an’i Kirenaîka (na Sirenaîka), an’i Kipra (na Kiprosy, na Sipra), ary nifehy ny faritry ny Ranomasina Mediteranea sy ny "ranomasin’ny India". Ny toekaren’i Ejipta tamin’izany fotoana izany anefa dia nifototra tamin’ny fitrandrahana ny herin’ireo tantsaha ejipsiana izay novesarana hetra noho ny tany nasainy lasan’ny mpanjaka manontolo. Ny fitantanana ny raharaham-panjakana dia niandraiketan’ireo mpanjanatany makedôniana sy grika ary ankoatra azy ireo dia ny Persiana na Jody (na Jiosy) izay vitsy an’isa no afaka nisahana asam-panjakana ambony. Nitombo noho izany ny tsy hafalian’ny vahoaka ka niteraka savorovoro nanomboka tamin’ny fanapahan’i Ptôlemaiôsy IV Filôpatôra (222-205 tal. J.K.). Nitombo izaitsizy izany fanoherana izany ka niteraka ady tao an-dapa izay nahakely hery ny fitondrana. Nanararaotra izany fihalemen’i Ejipta ptôlemaîka izany ireo Seleokida (na Seleosida) mpifanandrina amin’ny Lagida (na Lazida) amin’ny fifehezana an’i Siria. Tamin’ny taona 168 i Antiôkôsy IV Epifanesy dia nanafika an’i Aleksandria izay saika tsy avotra raha tsy nisy ny fidiran’ny Rômana an-tsehatra.
Nanomboka tamin’izany fotoana izany dia nihanitombo hatrany ny fidiran’i Rôma tamin’ny raharahan-tokantranon’i Ejipta. Nanambana hatrany ny faharavan’ny fanjakan’ny Lagida na dia teo aza ny hakingan’ny mpanjakavavy Kleôpatra izay nihavana tamin’i Jolio Kaisara sy tamin’i Marko Antônio. Taorian’ny nandresen’ny andian-tafika (legiôna) rômana notarihin’i Ôktavio (izay ho lasa Aogosto) ny tafik’i Kleôpatra nandritra ny ampahan’ady tao Aktioma tamin’ny taona 31 tal. J.K. dia namono tena i Kleôpatra.
Ny vanimpotoana rômanaHanova
Nofehezin’ny fanjakana rômana, avy eo nanjakan’ny fanjakana bizantina, i Ejpta tamin’ny taona 30 tal. J.K. hatramin’ny taona 642 taor. J.K. Nitoetra ho faritany rômana i Ejipta nandritra ny taonjato fito eo ho eo. Nitovitovy tamin’ny fitantanana ny raharaham-panjakana manerana an’i Ejipta tamin’ny andron’ny Lagida ny zava-nisy tamin’izay. Nanahy ny hivadihan’ny governoran’ny faritany ho lasa faraôna vaovao anefa i Aogosto ka nalain’ny emperora ho eo ambany fiahian’ny tenany mivantana ny faritanin’i Ejipta.
Nandritra ny vanimpotoana rômana dia azo lazaina fa niaina tanatin’ny fandriampahalemana i Ejipta. Tsy dia nanafika firy an’i Asoàna (Assouan) ao amin’ny sisintaniny atsimo ny Etiôpiana. I Aleksandria, izay isan'ny tanan-dehibe tao amin’ny Empira rômana, dia ivontoeran’ny raharaham-barotra izay tena nandroso nifanaovany tamin’i India sy ny Saikanosin’i Arabia ary ireo firenena ao amin’ny faritr’i Mediteranea. Tsy dia tafiditra tao amin’ny vahoaka ejiptiana, izay nandray ny kolontsaina helenistika tamin’ny andron’ny dinastian’ireo Ptôlemaeôsy, ny kolontsaina rômana. Tsy varay ho isan’ny olom-pirenena rômana rahateo ny vahoaka ejipsiana raha tsy tamin’ny andron’ny emperora Karakala (Caracalla) tamin’ny taona 212 taor. J.K.
Niaro ny fivavahana ejipsiana taloha ny emperora rômana mba hitandroany ny fihavanana amin’ny mpitondra fivavahana, ka nanohy ny fanamboarana sy ny fanaingoana ireo tempoly izay efa natombok’ireo Ptôlemeôsy ary ireo emperora ireo dia nampanokitra ny anarany tamin’ny vato sahala amin’ny nataon’ireo faraôna taloha. Ny fivavahana ejiptiana tamin’ny andriamanitra Isisy sy Serapisy dia niely tamin’ny tontolo grika-rômana. Nandroso koa ny fivavahana kristiana tamin’izany fotoana izany, izay nahazo ny fianakaviambe jiosy tao Aleksandria izay nifindra monina tao tamin’ny fikomiana roa nifanesy nanoheran’ny Jiosy ny Rômana tao Palestina (taona 66 sy 117 taor. J.K.). Niely haingana tao amin’ny mponin’i Ejipta ny krisitanisma, ka nisy ny fanoherana ny fiveloman’ny Rômana tamin’ny hatsembohan’izy ireo. Niroborobo teo amin’ny fivavahana kristiana ny fiteny kôpta izay endriky ny fiteny ejipsiana taty aoriana.
Ny vanimpotoana bizantinaHanova
Taorian’ny fizaràn’ny Empira rômana tamin’ny taona 395 taor. J.K. dia lasa nofehezin’ny Bizantina i Ejipta ka lasa nahazo fahefana lehibe teo amin’ny Fiangonana kristiana ny patriarkan’i Aleksandria, nanohana azy tamin’ny fifanandrinany tamin’ny kristiana tao Kônstantinôpôly ny papa tao Rôma. I Kirilosy, patriarkan’i Aleksandria tamin’ny taona 412 hatramin’ny 444 taor. J.K. dia nahazo rariny tamin’ny adiny amin’i Nestôriôsy patriarkan’i Kônstantinôpôly. Taty aoriana dia natahoran’ny fitondran’ny papa ny fahefana avy tao Aleksandria. I Diôskôra mpandimby an’i Kirilosy, izay nnanohana ny tsangan-kevitra miaro ny fananan’i Jesoa natiora tokana (mônôfizisma) dia naongana nandritra ilay kônsily natao tao Kalkedôna (na Kalsedoana) tamin’ny taona 451. Nandray ny firehana mônofizita noho izany anefa ny ankamaroan’ny Kristiana tao Ejipta. Nandritra ny taonjato roa manaraka, izay nandrosoan’ny zavakanto kôpta fatratra, dia niharan’ny fanenjehan’ny fitondrana bizantina, izay nahazo koa ny Jiosy, ny Kristiana tao Ejipta. Telo ambin’ny folo taona ny fibodoan-tany nataon’ny Sasanida (taona 616 hatramin’ny 629 taor. J.K.) dia nahatakatran ny fara tampony ny fankahalana ny fivavahan’ny hafa. Namoaka didy maro ny mpanjaka Herakliosy mba hanaovana batisa (na batemy) na-tery ny Jiosy sy handraisan’ny foto-pampianaran’ny Fiangonana bizantina amin’ireo Kristiana kôpta.
Tapitra tamin’ny taona 642 taor. J.K. ny fanjakazakan’ny Bizantina tao Ejipta tamin’ny nandresen’ny Arabo an’i Aleksandria ka ny Arabo indray no nanjaka tamin’i Ejipta.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ejipta_tamin%27_ny_Andro_Taloha&oldid=1037870"
Dernière modification le 15 Septambra 2021, à 08:56
Voaova farany tamin'ny 15 Septambra 2021 amin'ny 08:56 ity pejy ity.